Wednesday, 27 December 2017 10:40
Finfinnee, Muddee 18,2010- Rakkoon dhiyeessii simiintoo fi kaffaltii dhaabbilee ijaarsaa manneen waliin jireenyaa Finfinnee furamee humna guutudhaan hojiitti galamuusaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeet hubateera.
Proojaktiin Misooma Manneenii Finfinnees akkataa sagantaa qabametti ijaarsa manneen waliin jireenyaa xumuruuf hojjetamaa akka jiru ibseera.
Ijaarsa manneenitiin cinaatti bu’uuraalee misoomaas guutuuf carraaqqamaat jira.
Baatii tokkoon dura dhiyeessiin simiintoo iraarsicharratti gufuu uumet ture.
Kunis dhiyeessii priikaastii fi blookkeettiirratti rakkoo uumet ture.
Saayitii Safaraa Arraabsaatti manneen 140 sagantaa 20/80n ijaarramaa jiru.
Saayiticharrattis dhaabbileen ijaarsaa 61 fi gorsitoonni 2 hirmaachaa jiru.
Yeroo ammaa simiintoon guutinsa armaataafis ta’e dhoobbiif oolu dhiyaachaa jira.
Rakkoon kaffaltiis furamuusaa dhaabbileen ijaarsaa fi gorsarratti bobba’an ni himu.
Yeroo ammaa manneen kumni 94 ijaarsarra jiru.
Ijaarsi isaaniis marsaa lamaan kan gaggeeffamu yammuu ta’u, sadarkaa marsaa jalqabaatti manneen 52,651 bara kana akka xumuramaniif karoorfamee hojjetamaa jira.
Raawwin ijaarsa waliigalaa isaaniis %78 irra ga’eera.
Manneen hafan 41,000 ammoo dhuma bara kanaatti %80rra akka ga’aniif karoorfamee hojjetamaa jiraachuusaa hoji gaggeesssaan Proojaktii Misooma Manneenii Finfinnee obbo Haaragoota Alamuun Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.
Tigist Silashiitu gabaase.(FBC)
More in this category: « Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sadarkaa olaanaarra ga’e adda baafaman Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa Finfinneetti gaggeeffamuufi »
TV OROMIYA NOV-14-2016 Views : 3857
Torbe Kana 51753
Ji'a Kana 91994
01/05/07 irraa eggalee 8191149
Kan Amma Daawwachaa Jiran 40